Nepal Deep | दिसा नगनाउने हुँदैन, निरंकुशता निरंकुशता नै हुन्छ सकारात्मक हुँदैन : संग्रौला
दिसा नगनाउने हुँदैन, निरंकुशता निरंकुशता नै हुन्छ सकारात्मक हुँदैन : संग्रौला
काठमाडौँ। पूर्वन्यायाधिवक्ता तथा प्रा.डा युवराज संग्रौलाले निरंकुशतामा सकरात्मकता खोज्नु फगत भ्रम भएको बताएका छन्। संग्रौलाले दिसा नगनाउने हुँदैन भन्दै निरंकुशता निरंकुशता नै हुने बताएका हुन्।
संग्रौलाले भने, ‘यदि कोही दिसा नै दिसा हो भने नगनौने दिसा ल्याऊ भन्न मिल्छ? निरंकुशता निरंकुशता हुन्छ भने उहाँहरुको के सकारात्मक खोज्दै हुनुहुन्छ?उहाँहरुको संजालले ढाकिरहेको छ, अब सकरात्मक निरंकुश व्यवस्था हुनु पर्यो।’
संग्रौलाले प्राध्यापक एवं बुद्धिजीवीहरुको ठूलो तप्काले ‘सकारात्मक’को फुर्को ओडाएर निरंकुशतालाई पक्ष पोषण गरेको भन्दै गुनासो पोखेका छन्। उनले भने, ‘बुद्धिजीवीको ठूलो तप्का ‘सकारात्मक निरंकुशता’ भनि रहेको छ। मलाई दुर्भाग्य त त्यति बेला लाग्छ जब यस्तो कुरा प्राध्यापक लेख्छन्। प्राध्यापकहरु लेख्छन् देशमा सकरात्मक निरंकुशता चाहियो रे! निरंकुशता सकारात्मक हुँदैन। दिसा नगनाउने हुँदैन। हात्ती बाघ हुँदैन, स्याल सिंह हुँदैन। सिधै निरंकुशता ल्याउने भन्नु न किन सकारात्मक भन्नुहुन्छ? यस्ता बुद्धिजीवीबाट देश खतरामा छ।’
संग्रौलाले संसद पुनस्थापना भइहाल्यो भने पुरानै शैलीमा नेतामुखी शासन चल्न थाल्यो भने पनि देश अघि नबढ्ने बताए। संसद पुनस्थापना अघि पनि देशमा समस्या रहेको भूल्न नहुने बताए। उनले देश त्यति बेला पनि ‘स्ट्याटस क्यो’मा रहेको अवगत गराए।
‘अब फेरी प्रतिनिधि सभा विघटन अघिको स्ट्याटस क्योमा जाने हो भने पनि देश अघि जाँदैन। नेताहरु नफेरिने हो भने फेरी पनि देश अघि बढ्दैन। कसै सँग सल्लाह नगर्ने उहाँहरुको बानी नफेर्ने हो भने देश अघि जाँदैन,’ उनले भने।
संग्रौलाले नेताहरु जनताका प्रतिनिधि हुनुको साटो जनताका शासक भएकोले देश अघि नबढेको बताए। नेताहरुले जनतासँग आफू फेरिने वाचा र विश्वास दिलाउन नसके संसद पुनस्थापनाको लागि कोही पनि सडकमा आउने जस्तो नलागेको बताए।
उनले भने, ‘पार्टीको नेतृत्व गर्ने हामी नेता फेरिन्छौं नभने सम्म। अब हामी समाजवादको दिशा तर्फ लिएर जान्छौं। उहाँहरु २० जना सशस्त्रका सिपाहीहरु लिएर हिड्न छोड्नु हुन्छ र जनताका नेता हुनुहुन्छ भने जनता आउलान। होइन भने जनता आउँलान कि नआउँलान।’